गर्भपतन : यो पाटो पनि हेरौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
गर्भपतन : यो पाटो पनि हेरौं
फाल्गुन ५, २०७३ डा. अरूणा उप्रेती
म भारतको कोलकाता सहरमा एक वर्ष बस्दा थाहा भयो कि त्यहाँका गरिब गाउँमा पञ्जाबबाट मानिसहरू आएर गरिबका छोरीहरू किनेर विवाह गर्छन् र केही सन्तान भइसकेपछि श्रीमतीलाई लखेट्छन् ।
अहिलेको भारतमा यस्तो त हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो, तर विभिन्न पत्रपत्रिका र सेमिनारमा यही कुरा दोहोरिएपछि साँच्चै हुँदोरहेछ भन्ने भयो । पञ्जाबमा धनी मानिस र शिक्षितहरू बसोबास गर्ने भए पनि उनीहरूलाई छोराकै जरुरत पर्छ । लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने उनीहरूको चलनले गर्दा पञ्जाबमा विवाह गर्न युवती नै कम भएको कुरा सुन्दा मलाई नेपालमा त यस्तो हुँदैन भन्ने लागेको थियो । तर पछिल्लो समय नेपालका केही जिल्ला अस्पतालमा छोरीको तुलनामा छोरा बढी जन्मेको तथ्यांक देखिएपछि हामीकहाँ पनि केही वर्षपछि पञ्जाब र हरियाणामा जस्तै गाउँमा गएर युवतीहरू किनेर विवाह गर्ने चलन बढ्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
बुझ्दै जाँदा गर्भमा छोरी भएमा गर्भपतन गर्न डोल्पा र मुगुबाट नेपालगन्जसम्म पनि महिलाहरू जाने गरेको पाइयो । डोल्पा र मुगु गरिबीले आक्रान्त जिल्ला हुन् भनी तथ्यांकले देखाउँछ । तर त्यहाँका परिवारलाई पनि छोरा चाहिने बाध्यताले गर्भ रहेपछि जँचाउन नेपालगन्जसम्म पुग्दा, अनि निजी क्लिनिकमा गएर गर्भपतन गराउन कति खर्च लाग्दो हो ? यस्तो घटना सुनेपछि कतिजनाले ‘महिलाहरू नै गर्भपतन गराउन चाहन्छन्, महिला डाक्टरहरूले पनि गर्भपतन गराइदिन्छन्, त्यसैले दोषी त महिला नै हुन्’ भन्न भ्याउँछन् । तर महिलाहरूले छोरी भनेर थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउनुको पछाडि कति ठूलो विवशता छ, कसैले विचार गर्छ ? छोरी पाएपछि महिलालाई अपमानित गरेर घरबाट निकालिदिने, दुव्र्यवहार गर्ने, सके छोरा पाउन अर्को व्यवहार गर्ने हुनाले महिलाहरूले आफ्नो मन मारेर भए पनि छोरी भन्ने थाहा पाएपछि गर्भ तुहाउन विवश हुन्छन् । किनभने ती महिलाहरू पनि आफ्नो जिन्दगी जिउन चाहन्छन् ।
धार्मिक विचारले भरिपूर्ण भएका मानिसहरू छोरा भएन भने दागबत्ती दिने र वंशरक्षा गर्ने मान्छे हुँदैन भनेर छोरीलाई बोझ भन्ठान्ने बेलासम्म वा धार्मिक अधिकार नदिने बेलासम्म गर्भबाट छोरी तुहाउने चलन कम हुँदैन । कुनै कानुन, क्लिनिकको नियम अनुगमन गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन । गर्भपतनको अधिकार महिलालाई दिइएको छ । उनले कुनै ठाउँमा गएर भ्रूण पहिचान गरिन् र अर्को ठाउँमा गएर ‘मेरो गर्भले गर्दा म मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएँ, गर्भ तुहाइदिनुस्’ भनेपछि चिकित्सकले गर्भपतनका कानुनी परिधिभित्रै रहेर गर्भ तुहाउँदा कानुन लाग्छ र ? गर्भ तुहाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ– ती महिलाले कुनै अर्को ठाउँमा गर्भजाँच गराएर छोरी भन्ने पत्ता लगाएर त्यहाँ आएकी हुन् । नेपालमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन र गराएमा सजाय हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । यस सम्बन्धी कानुन बनेको यतिका वर्षमा स्वास्थ्यकर्मी समातिएका घटना पनि विरलै होलान् । कानुन बनाउने सांसद, वकिल, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारीले नै गर्भमा छोरी भन्ने थाहा पाएपछि निजी अस्पतालमा गएर गर्भपतन गराएका घटनाहरू छन् । जबसम्म समाजमा छोरीलाई पनि छोरासरह अंश, वंश र धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने, पिण्ड र दागबत्ती दिने अधिकार हुँदैन, छोरीहरूलाई तुहाउने प्रवृत्ति कम हुँदैन । भारतमा करिब पाँच दशकअघि लिंग पहिचान गरी गर्भ तुहाउन नपाइने कानुन बनेको थियो । तर त्यो कानुनकै उपहास गरेको छ, त्यहाँको अवस्थाले ।
छोरीको गर्भ तुहाउनुलाई ‘भ्रूणहत्या’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पनि गलत छ । यदि छोरी छ भन्ने थाहा पाएर गर्भ तुहाउनुलाई भ्रूणहत्या भन्ने हो भने महिलाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नचाहेको गर्भ तुहाउनु पनि भ्रूणहत्या नै हो त ? अनि के प्रसूतिगृह, थापाथली जहाँ गर्भपतनको सुविधा छ वा मेरी स्टोप्स क्लिनिकमा ‘यहाँ भ्रूणहत्या गरिन्छ’ भनेर बोर्ड झुन्ड्याउने ? गर्भपतन गराउने अधिकारलाई कमजोर पार्छ, यस्ता शब्दहरूको प्रयोगले । गर्भपतनका पक्षमा कानुनी अधिकार लड्दा हामीले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेर आमाहरूको मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर सुरक्षित गर्भपतन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौं । भारतको केरला, सिक्किम, मेघालय, अरूणाचल, आसाम आदि प्रदेशमा गर्भमा छोरी भन्ने थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउने चलन छैन । किनभने त्यहाँको संस्कृति र धर्मले छोरीलाई नेपाल र भारतका अन्य भागमा जस्तो अवहेलना गर्दैन । यसले पनि देखाउँछ, यस्तो समस्या कानुनले मात्र रोक्न सक्दैन । महिला विरुद्घ हुने भेदभाव, गलत संस्कृति रोकेर, धार्मिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार नदिएसम्म समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले छोरीहरूको संख्या घटेकोमा दु:ख मान्नेहरूले धार्मिक गुरुहरूलाई भनेर धार्मिक रीतिरिवाज परिवर्तन गर्न लगाउनुस्, महिलाविरोधी कानुन पुनर्लेखन गर्न लगाउनुस् । गर्भपतन गराउने डाक्टर र नर्सलाई गाली गरेर र उनीहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्छ भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले कानुनमात्रै बनाएर समस्या समाधान हुने भए नेपालमा धेरै समस्या उहिल्यै सुल्झिसक्थे ।
गर्भपतन गरेको अपराधमा जेल पर्ने केवल गरिब, एकल र गाउँका महिला हुन्छन् । म र मेरा कति साथीले गर्भपतन गराउँदा तत्कालीन सरकारले हामीलाई जेल हाल्न सकेन । अहिले पनि छोरीलाई गर्भपतन गराउने कुन महिला र कुन स्वास्थ्यकर्मीलाई जेल हालिएको छ र ?
प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७३ ०७:४८
कर्तव्य बिर्सिएको अधिकार
फाल्गुन ५, २०७३ रामेश्वरी पन्त
गत माघमा केही निन्दनीय, क्रूर र मानवताहीन घटनाहरू सञ्चार माध्यममा आए । सिन्धुलीमा एक युवाले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै आफ्नै प्रेमिकामाथि सामुहिक बलात्कार गराएर हत्या गरे । नेपालगन्जमा एक पतिले पत्नीलाई बलिरहेको टुकीले हिर्काउँदा जलेर मृत्यु भयो । बुटवलमा एक प्रेमीले प्रेमिकालाई धोका दिएको भन्दै एसिड खन्याएर हत्या गरे ।
यस्ता अपराधको जति नै घृणा र निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । प्राय: पुरुष अहम्का कारण महिलामाथि हुने यस्ता अपराधका घटना पटक—पटक भइरहन्छन् । तर के महिलाले अपराध गर्दै गर्दैनन् त ? क्रूरताको सीमा पुरुषले मात्र पार गर्छन् त ? होइन । महिलाले पनि क्रूरताको सीमा पार गर्छन् । घटनाको संख्यामा मात्र घटीबढी हुनसक्ला ।
माघ २३ गते सप्तरीकी एक महिलाले जेठानीसँगको रिसमा तीन वर्षीय नाबालक भतिजाको घाँटी थिचेर हत्या गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा आयो । जेठानीसँगको घरायसी विवादमा उसको अबोध सन्तानको हत्या गर्नु क्रूरताको पराकाष्ठा हो । भनिन्छ, नारी जीवनदाता हुन् । माया, ममता र स्नेहकी खानी हुन्, तर तिनै नारी यतिसम्म निर्दयी हत्यारा हुनसक्छे ? पत्याउन कठिन हुन्छ, यस्तो यथार्थलाई र पनि पटक—पटक सुनिन्छन्, यस्ता घटना । कहिले सौताका, कहिले छिमेकीका बच्चा मारेका घटना सुनिन्छन् । कतै दाइजोको निहुँमा सासुले बुहारी जलाएको सुनिन्छ, कतै अस्वीकृत प्रेम गरेको भन्दै आमाले छोरी जलाएको वा मारेको सुनिन्छ । कतै अवैध सम्बन्धका कारण आमाले आफ्नै शिशुको हत्या गरेको सुनिन्छ । हिजो मात्रको कुरा, भक्तपुरमा एक महिलाले छिमेकी बालिका बलात्कार गर्न लोग्नेलाई सघाएको खबर प्रकाशित भयो । नारीका यस्ता कुरूप रूपलाई कुनै पनि हालतमा क्षम्य मान्न सकिंँदैन । माघको तेस्रो साता गुल्मी अर्बेनीमा ७८ वर्षीय वृद्ध दलित पुरुष लालबहादुर सुनार र ४३ वर्षीया बाहुन महिला सावित्रा न्यौपानेको विवाहले निकै चर्चा पायो । लालबहादुर र सावित्राको विवाहलाई बिभिन्न सञ्चार माध्यममा यसकारण पनि चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइयो कि ती दुईमध्ये लालबहादुर वृद्ध थिए, दलित थिए र विधुर थिए । अर्कोतिर सावित्रा जम्माजम्मी ४३ वर्षकी अर्थात् लालबहादुर भन्दा करिब आधा उमेरले कान्छी तर पति र ससाना चार छोराछोरी भएकी ‘बाहुनी’ ।
लालबहादुर र सावित्राको सम्बन्धलाई लिएर गाउँनिकाला गरिएका दुबैजनालाई अन्तत: दलित अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न अधिकारवादी संस्थाको दबाबमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै मुख्य अतिथिको भूमिकामा रहेर धुमधामले बाजागाजा र नाचगानसहित बेहुला—बेहुलीको रूपमा भित्र्याए । गाउँ निकालापछि दलित अधिकारका कुरा र जातीय विभेदका कुरा चर्किनु आफ्नो ठाउँमा अनुचित नहुन सक्छ । तर के सावित्रा न्यौपानेले गरेको प्रेम र विवाह सामाजिक मूल्य—मान्यता, नैतिकता र कर्तव्यका दृष्टिले उपयुक्त थियो ? वा हुनसक्छ ? हुन त कसैले कसैसँग प्रेम वा विवाह गरेकै आधारमा उसलाई बेघर गर्दै गाउँनिकाला गर्नु उसको मानवअधिकारको हनन पक्कै हो । तर अधिकारका कुरा गर्दा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा व्यक्तिले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वको कुरालाई पनि कदापि नजरन्दाज गर्न मिल्दैन ।
यो विवाहलाई सकेसम्म महिमामण्डित गरियो । मानौं, यो एउटा अलौकिक विवाह हो, दलित र बाहुन बीचको विवाह ! समाज परिवर्तनको सूचक ! तर यो विवाहले अर्को एक परिवारको बिचल्ली भएको कुरा कमैले देखे । पत्नी मरेपछि २२ वर्षसम्म एकल जीवन बिताएका वृद्ध लालबहादुरले अधबैंसे महिलालाई बिहे गरेर घर भित्र्याउनु साँच्ची नै उनको लागि शौभाग्यकै कुरा हुनजाला । बुढेसकालमा आफूलाई स्याहार्ने एउटी महिला जो पाएका छन् । तर बौद्धिक अपाङ्गता भएका पति र आमाको माया, ममता र मार्गनिर्देशको खाँचोमा रहेका सन्तानलाई छोडेर लोग्ने—स्वास्नीबीच झगडा हुँदा माया देखाउने, दु:खमा सहानुभूति प्रकट गर्ने एउटा बाबु उमेरको वृद्ध पुरुषसँग पिरती गाँसी लोक, लाज, नैतिकता र कर्तव्य सबै बिर्सेर उसकी पत्नीको रूपमा नाच्दै रमाउँदै हात समातेर हिँडेकी सावित्रालाई प्राकृतिक नियमअनुसार वृद्ध लालबहादुरको मृत्युपछि कसले स्याहार्ला ? वृद्ध र अशक्त बन्दै गएपछि सावित्रालाई लालबहादुरका छोराबुहारीले साँच्चीकै माया गरेर स्याहार्लान् ? या उनलाई ती बेसहारा बनाएर छोडेका छोराछोरीको श्राप लाग्ला ?
झट्ट हेर्दा सबैतिरबाट अमिल्दो यो विवाहबारे प्रकाशित र प्रसारित कुरा हेरेर मनमा केही प्रश्न उठिरहे– यदि लालबहादुरको सट्टामा चन्द्रकान्त न्यौपाने दलित भैदिएको भए अधिकारकर्मीका आवाज कतातिर तेर्सिंदा हुन् ? आमाविहीन बच्चाहरू उनीहरूको नजरमा पर्थे कि पर्दैनथे होलान् ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै माला र खादा पहिर्‍याएर बेहुला—बेहुली भित्र्याउने काम गर्दा उनलाई यस्तो विवाह प्रचलित मुलुकी ऐनविपरीत छ भन्ने ज्ञान थियो कि थिएन होला ? मुलुकी ऐनले त विवाहित अवस्थामा रहेका पुरुष वा महिलाले अर्को विवाह गरेमा दण्डनीय हुने भनेको छ । लालबहादुरको हकमा यो विवाह उचित होला, तर सावित्राले गरेको विवाहलाई ऐनले के भन्छ ? के यो विवाहमा प्रजिअको उपस्थिति त्यति महत्त्वपूर्ण थियो ? अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न त यो छ कि यो विवाहले समाजलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ? आफ्नो अपाङ्ग पतिको गालीगलौज सहन नसकेर टाउको बिसाउने मायालु छाती खोजेर सावित्रा न्यौपाने ८० पुग्नलागेका लालबहादुर सुनारसँग गएकी हुन् कि यौनसन्तुष्टि खोज्दै ? सन्तानको मायाले किन रोक्न सकेन एउटी आमालाई ?
लालबहादुरको भत्काइएको ‘देखिने घर’ त अधिकारकर्मीहरूले बनाइदिए रे ! तर सावित्रा र लालबहादुर मिलेर भत्काइएको सावित्राका पति चन्द्रकान्त न्यौपानेको ‘नदेखिने घर’ कसले बनाउने ? नारीलाई कतै धर्ती भनिने गर्छ, कतै समुद्र, अनि कतै माया र ममताकी खानी । कतै देवी भनिन्छ, अनि कतै फूल । यी सब विम्बका अर्थ र महत्त्वको आफ्नै गरिमा छन् । धेरै हदमा नारी स्वयंले नै यी शब्दका गरिमालाई बचाएर राख्न सकिन् भने आफू र परिवार दुबै सुखी बन्न सक्छ । यसो भन्दैमा नारीले अन्याय र अत्याचार सहेरै बस्नुपर्छ भन्ने आशय पंक्तिकारको होइन । तर नहसनु भन्दैमा सबै सीमा भत्काएर बुर्कुसी मार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।